Ngaba siya kuyibona iTelefonica kulo nyaka ngaphezulu kwe-10 euro? | Ezezimali
Ukuba kukho ixabiso elilelona liziko lokuxelwa kwangaphambili kwicala labatyali mali abancinci nabaphakathi, ngaphandle kwamathandabuzo yile teleco Telefónica. Umnxibelelanisi wezoqhakamshelwano yenye yeenkampani ezidweliswe kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zamashishini esizwe kunye nelona nani liphezulu lezivumelwano. Kodwa kule minyaka idlulileyo ebeyibonile ngokuxabisa kwezabelo zakhe sele kusondele kakhulu ku amanqanaba akwii-euro ezingama-7 isabelo ngasinye. Ngokuchasene nezikhundla zafika ezivela kubalamli abahlukeneyo bezezimali.
Ngoku esinye sezitshixo esineTelefonica kukubonisa ukuba ngaba inkampani edwelisiweyo iya kuba nakho ukudiliza udonga olunayo kwi-euro ezingama-10. Into ebingenakulindeleka ukuba ibekho kwiikowuti ezenziweyo, ngakumbi kwisemester yokugqibela yonyaka ophelileyo. Ngoku elinye lamathandabuzo abatyali mali abancinci nabaphakathi abanalo kukuba bazokwazi na ukwenza izikhundla zabo zinenzuzo kulo nyaka mtsha wentengiso. Ukuze ubone ukuba kufanelekile ngena okanye uphume yemarike yemasheya.
Akunakulityalwa ukuba kwiminyaka nje embalwa edlulileyo ixabiso lezabelo zeTelefonica lingaphaya kwe-12 okanye i-13 ye-euro. Ngamanye amagama, ukwehla kwexabiso ngabatyali mali kuye kwabonakala ngaphezulu, nge ukuhla kwinzuzo ngaphezulu kwe-30%. Ukuya kwinqanaba lokuba le nto yenze ukuba abanini zabelo kule nkampani inkulu ye-Ibex babe novalo.Nangona yonke into iya kuxhomekeka, kwinqanaba elikhulu, kwindlela yokuziphatha kwesalathiso semarike yaseSpain. Ngamathemba ethembisayo asekwe kwiikhrayitheriya ezikhutshwe ngabahlalutyi bezemali abohlukeneyo.
1 I-Telefónica: Iziphumo zeshishini
2 Ukukhangela amanani amabini
3 Iingcebiso zoHlahlelo
4 Iziphumo zeNkampani
5 Ukuthengiswa kweAntares
6 Ukujonga ngakumbi
I-Telefónica: Iziphumo zeshishini
Into edlala ngokuthanda komnxeba we-telecom yesizwe kwaye inokuba sisishukumisi sentsingiselo entsha yokunyuka. Ngale ndlela, kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba esinye sezona ziganeko zichaphazelekayo kukuba iziphumo zekota zale nkampani yefowuni zibonise ngokucacileyo ukuba umqhubi ugcina isingqisho esiqhubekayo ukunciphisa ityala lakho. Lo ngomnye wemicimbi ebakhathaza kakhulu abatyali zimali kuba yenye yezinto ezibuthathaka kwenye yeenkampani ezithile zeIbex 35. Ngaphaya kwezinye iindlela zobuchwephesha kwaye inokuba ikwangumbono osisiseko.
Kwelinye icala, i-Telefónica ibisoloko ifuna ukunciphisa ityala ngokwasemzimbeni, ishiya ukuthengisa iiasethi ngasemva. Lo manyathelo aphakamisile ukuba inxenye elungileyo yabatyali mali ibuyile kubuhlanti bale nkampani idwelisiweyo. Nangona kuyakufuneka kubonwe kwangaphambili ukuba iziphumo zeshishini ziya kuba njani eziza kukhula kulo nyaka mtsha uqalile nje. Kuba imeko enkulu ukungazinzi kwiimarike zezemali kwaye oko kungonakalisa ixabiso lezabelo zakho. Into ekufuneka abatyali mali abancinci nabaphakathi babe nayo kwezi zihlandlo zichanekileyo.
Ukukhangela amanani amabini
Eyona njongo iphambili yezenzo zikaTelefonica kwiinyanga ezizayo, nangaphezulu kwezinye izinto eziqwalaselwayo, iya kuba kukufuna kunye nokudlula kwinqanaba elibalulekileyo lezengqondo elisekwe I-10 yeuros kwisabelo ngasinye. Into engacacanga okwangoku ngokuxhomekeke kukuziphatha gwenxa okungaphaya okuboniswa ziimarike zezabelo kwinqanaba lehlabathi. Apho ityala lale nkampani lisondele kwi-43.000 yezigidi ze-euro. Ngayiphi na imeko, iziphumo zeshishini zibonise ukuba zincitshisiwe phantse nge-10% kunyaka nje omnye.
Ezi ziindaba ezimnandi zokudweliswa kwakho ngo-2019 onokuqhubeka nazo izikhundla zokunyuka kwaye ugqibe le khosi yentengiso yemasheya ngebhalansi elungileyo. Kwelinye icala, kulunge kakhulu ukukhumbula ukuba ezi datha zaseburhulumenteni ziqinisekisa ukuba inkampani yezonxibelelwano isekwindlela ephezulu. Ubuncinci kwinto ebhekisa kwixesha eliphakathi nelide, elixesha apho abatyali zimali abancinci nabaphakathi behlala besiya ngokuthe ngcembe ekwenziweni kotshintshiselwano lokonga okuzinzileyo kwaye ngaxeshanye belungelelaniswe koko kumele kwiimarike zesitokhwe.
Ngaphandle kwento ebonakala ngathi inokuqala, inyani yeyokuba abatyali mali bajonga ukuba izabelo zale nkampani zonxibelelwano zisemjikelo ophezulu, apho uninzi lwabahlalutyi bezemali bathambekele ekucebiseni ukuthengwa kunye nokunikezela ngexabiso ekujoliswe kulo liphezulu kunexabiso langoku. . Ngokuxabisa okubandakanyiweyo kumanqanaba ziba phakathi kwe-8 kunye ne-10 euro isabelo ngasinye. Nangona kukho ezinye eziziphawula ngaphezulu kwale miqolo kumaxabiso azo.
Nokuba yeyiphi na indlela, kubonakala kucacile ukuba ngoku Eli asiloxesha lokuvala izikhundla ukuba ibekwe kwixabiso. Nangona usenokuba ne-bearish run kwiinyanga ezimbalwa ezizayo okanye nakwiiveki. Kunzima ukubona izabelo zeTelefonica ngexabiso elingaphantsi kwe-euro ezingama-7. Njengomphumo wale meko, utyalo-mali olwenziwe kwixesha eliphakathi nelide aluzukubonelela ngengxaki ezigqithileyo kubatyali zimali abancinci nabaphakathi, abaya kuba lula ukwenza ingeniso yabo ngokwenza la maxesha. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga esisiseko.
Iziphumo zekota ezibonelelwe yiTelefonica kwinqanaba elingaphezulu okanye elingaphantsi luye lwanelisa iimarike zezemali. Kuba, ezi zibonelelo ziye zanda xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Nangona ezona datha zichanekileyo zokuba isithuba singaya phi kwiintsuku okanye iiveki ezizayo yeyona ibhekisa kwinto yokuba ityala lilonke I-Telefónica ifikelele kwi-42.636 yezigidi ze-euro. Oku kuthetha ngokwenyani ukuba yehliswe nge-10% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo, nangona eyona nto inomdla kukuba iye yacuthwa kwikota yesithandathu ilandelelana. Inyani yokuba abatyali mali bathande kakhulu.
Ukusuka apho inokukhulisa i-rally eqhubayo enokuthi ithathe izihloko zayo ukuya kwinqanaba layo lengqondo, elisekwe kwi-euro ezilishumi ngesabelo ngasinye. Ngaphaya koko zinokuveliswa uyalikhupha ixabiso lakho, yobukhulu obukhulu okanye obuncinci. Ezi ntshukumo zinokusetyenziselwa ukuqokelela izikhundla kwinkampani yezabelo. Kwaye eyona nto inomdla ngalo msebenzi kukuba inokwenziwa ngexabiso elinokhuphiswano ngakumbi kunolu luhlu langoku. Ngokwazi kwayo ukuphonononga kwakhona akukho mathandabuzo okuba iya kuba phezulu, ngamagama onke: imfutshane, iphakathi kwaye inde.
Ngapha koko, iindaba zamva nje eziye zafikelela kubatyali mali kukusebenza kwequmrhu lelungu lesalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35. Ngengqiqo yokuba iTelefonica ifikelele kwisivumelwano ne IGupoo Catalana Occidente kwintengiso ye-100% yeAntares, inkampani yakhe yeinshurensi yobuqu eSpain, ngesixa esipheleleyo sezigidi ezili-161 zeerandi, njengoko kuchaziwe kwiKhomishini yeSizwe yoKhuseleko kwiMarike (CNMV).
Intengiselwano kulindeleke ukuba ivelise izibonelelo ezimalunga ne-90 yezigidi ze-euro zeTelefonica kunye nokwehliswa kwetyala elipheleleyo elikufutshane 30 million. Lo msitho wequmrhu usebenze ngokwenyuka kwamaxabiso ezabelo zawo, nangona ubunamandla obungakhange bube namandla kangako. Xa yonke into ibonakala ngathi ibonisa ukuba inokuhlaziya ngaphezulu kwe-4% okanye ngepesenti ebukhali ngakumbi apho bonke abaninizabelo bebeya kuxhamla kuyo.
Kwelinye icala, awungekhe ulibale ngeli xesha lokuba le nkampani idwelisiweyo ikwimeko enzima apho iinjongo zayo zibaluleke kakhulu kukwenziwa kwexabiso kunye nokwenza ngcono imbuyekezo kwikapitali oqeshiweyo. Ngaphezulu kokunye ukuthathelwa ingqalelo okude kwadlula iinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kubonakala kungaphantsi kokuphambili kwilayini yakhe yoshishino. Ngesi sizathu, ayothusi into yokuba abanye abahlalutyi beemarike zezemali bachaze ukuba inokuba njalo liphindwe kabini ixabiso lalo ngaxesha lithile kule minyaka imbalwa izayo.
Ukuntywiliselwa kwimeko apho umongameli weTelefonica, uJosé María Álvarez-Pallete, namhlanje ucele "isikhokelo sehlabathi" esibandakanya amalungelo, uxanduva kunye neenqobo zedatha yabemi. Ngokunxulumene nesakhelo solawulo apho inkampani edwelisiweyo idityanisiweyo, kuba kufuneka kukhethwe ukuba yeyiphi imigangatho yezomthetho kunye neyokuziphatha ekufuneka isekwe kwiminyaka yobugcisa. Le yinto apho inkampani yonxibelelwano idlala kakhulu kwaye inokunika umkhombandlela ongaqhelekanga malunga nokuba idilesi izakuya phi kwixabiso lodweliso lwayo. Ngaphandle kwamathandabuzo kulo nyaka kuyakubakho imiqondiso malunga nalo mba ubalulekileyo ngokubhekisele kumaxabiso awo kwiimarike zezemali zikazwelonke. Awuzukukhetha, ke ngoko, kodwa ujonge kakhulu into enokwenza nezi ndaba ukusukela ngoku. Sukulibala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ngaba siya kuyibona iTelefonica kulo nyaka ngaphezulu kwe-10 euro?